नेपाली कांग्रेसको जागरणमा नेताहरूको निहित स्वार्थ « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १९:०९
निर्वाचनमा पार्टीको पराजयबारे समीक्षा र निष्कर्ष बनाउन नचाहने, तीव्र दवाव आएपछि ४ महिनापछि बल्ल छलफल चलाउने तर प्रतिवेदन लेख्न नचाहने संस्थापनलाई सबक सिकाउन कि कार्यकर्तालाई उपदेश पिलाउन जागरण चाहिएको !
नेपाली कांग्रेसले हाल एकमहिने देशब्यापी जागरण अभियान चलाइरहेको एक हप्ता बितिसकेको छ । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व संरचना यथावत अनि लथालिङ्ग अवस्थामा राखेको र विगत निर्वाचनको निर्विवाद प्रतिवेदनसमेत तयार नगरेको पृष्ठभूमिमा जागरण अभियान शुरू गर्नुको औचित्य कति छ ? जागरणको आवश्यकता केन्द्रमा केन्द्रित सुविधाभोगी नेताहरूलाई हो कि प्रायः बञ्चितीकरणमा परेका जिल्लाका कार्यकर्ताहरूलाई जरुरी छ ?
“देउवा दाईको किचेन क्याबिनेटमा एक हुल खाउवीर, लठैत, लम्पट, विदेशी दलाल, सत्तापक्षका तावेदार, नातागोता र बुद्धिसुद्धि नभएका स्वाँठहरू छन्, तिनकै घेरामा गलत सूचना र डेढअक्कली विश्लेषण सुनेर देउवा दाई निर्णय गर्नुहुन्छ । ‘जिऊ भारी बुद्धि डाँडा पारी’ को अवस्थाले पार्टी कहाँ जुझारु बन्न सक्छ !”
निर्वाचनमा पार्टीको पराजयबारे समीक्षा र निष्कर्ष बनाउने विषय सुन्नै नचाहने, तीव्र दवाव आएको ४ महिनापछि बल्लतल्ल छलफलसम्म चलाउने तर प्रतिवेदन लेख्नै नचाहने सभापति र संस्थापनलाई सबक सिकाउन कि कार्यकर्तालाई उपदेश पिलाउन आज आएर जागरण चाहिएको ? जागरणले यो ज्वलन्त प्रश्न उठाएको देखिन्छ । कार्यकर्ता पंक्तिमा यस्ता प्रश्नहरू महत्वपूर्ण देखिएका छन् । जागरण आफैँमा अनावश्यक र नराम्रो कुरा होइन, तर यथास्थितिबीचको जागरणमा अतिआकांक्षी नेताहरूको निहित स्वार्थ गढेर बसेको देखिन्छ । स्वार्थका दुई रुप हुन्, (१) नेतृत्वको नालायकीलाई कार्यकर्तासमक्ष छल्नु र (२) आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो पोजिशन बलियो बनाउनु ।
सबैजसो जिल्लाहरूबाट यो आक्रोश र गुनासो आइरहेको छ– नेपाली कांग्रेसको संस्थापन वा प्रतिपक्ष दुवैले परिस्थितिबाट शिक्षा र चेतना लिननसक्नु भयानक समस्या हो । जनपरिचालन हुने ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु, सरसल्लाह र सहमतिले काम गर्ने संस्कार तथा परम्परा मास्दै जानु, हचुवाको भरमा काम गर्ने परिपाटी बसाल्नु, कोठे झुण्डको अल्पबुद्धिको शिकार हुनु नै सभापति शेरबहादुर देउवाको विशेषता बन्न पुगेको छ । यसबारे संस्थापन पक्षकै कतिपय कार्यकर्ताको गुनासो सुनिन्छ, “देउवा दाईको किचेन क्याबिनेटमा एक हुल खाउवीर, लठैत, लम्पट, विदेशी दलाल, सत्तापक्षका तावेदार, नातागोता र बुद्धिसुद्धि नभएका स्वाँठहरू छन्, तिनकै घेरामा गलत सूचना र डेढअक्कली विश्लेषण सुनेर देउवा दाई निर्णय गर्नुहुन्छ । ‘जिऊ भारी बुद्धि डाँडा पारी’ को अवस्थाले पार्टी कहाँ जुझारु बन्न सक्छ !”
सभापति देउवा र रामचन्द्र पौडेलको दिमागमा त प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको कुर्सी बाहेक अरू कुनै सोच छँदैछैन । यही लोभ र ¥याल कडाइले गर्दा भारतले नेपालमाथि ५ महिनासम्म नाकाबन्दी गरिदिँदा पनि त्यसलाई उनीहरूले नाकाबन्दी भन्न सकेका थिएनन् भने यी कति पराधीन र परमुखापेक्षी भइरहेका रहेछन् !
गणतन्त्रको अचानोमा कांग्रेसलाई बली चढाउने कम्युनिस्ट ब्युहरचना जागृत छ । सत्तापक्ष चटके र प्रतिपक्ष रमिते भएको अवस्था छ । ‘शेर’ ‘शेखर’ ‘राम’ ‘प्रकाश’ आदिलाई उचालेर पछार्ने षड्यन्त्र टड्कारै देखिन्छ । तर सरोकारवालामा न कुनै संवेदनशीलता छ न त पार्टी संगठन सशक्त र जीवन्त बनाऔँ भन्ने नै छ ।
कुनैबेला कांग्रेस सभापतिको कुर्सीमा बसेर सुशील कोइरालाले प्रचण्डलाई “शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व तपाई लिनुहोस्”, “तपाई राजनेता बन्नुहोस्”, “हिरो बन्नुहोस्” भनेका थिए, तिनै प्रचण्ड पहिले सुशीलमाथि ‘हिरो’ पल्टिए, त्यसपछि २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्डले छोरी जिताउन सभापति देउवालाई उनको चुनाब प्रचारका लागि चितवन पु¥याए । यस्तो दुर्दशा भोगेर आएको काँग्रेसमा जागरण अभियान कार्यकर्तामा आउनुपर्ने कि पहिले नेतामा ?
गणतन्त्रको अचानोमा कांग्रेसलाई बली चढाउने कम्युनिस्ट ब्युहरचना जागृत छ । सत्तापक्ष चटके र प्रतिपक्ष रमिते भएको अवस्था छ । ‘शेर’ ‘शेखर’ ‘राम’ ‘प्रकाश’ आदिलाई उचालेर पछार्ने षड्यन्त्र टड्कारै देखिन्छ । तर सरोकारवालामा न कुनै संवेदनशीलता छ न त पार्टी संगठन सशक्त र जीवन्त बनाऔँ भन्ने नै छ । सत्तापक्षबाट अलोकतान्त्रिक गुप्त गतिविधि, मनपरी र अपारदर्शी निर्णय भइरहँदा यता लोकतान्त्रिक पक्षमा कुनै संवेदनशीलता नदेखिनु र केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अर्कैको भयो भन्ने नितान्त सतही स्वार्थबाट निर्देशित हुँदा दिमागमा बिर्को लागेझैँ आफ्नो अबको भूमिका तय गर्न नसक्नु लोकतन्त्रको भवितब्य र अनिश्चितताको द्योतक हो ।
हिजो राजतन्त्र रहँदासम्म आफ्ना सबै दोषका लागि राजतन्त्रतिर देखाएर कांग्रेसको बाटोमा दरबार नै तगारो भइदियो भनी अर्थ लगाइदिँदा तत्कालका लागि नाक जोगाउने उपाय हुन्थ्यो । तर राजतन्त्र नभएका यी दिनमाचाहिँ कांग्रेसलाई आफ्नो पौरख चलाउन केले तगारो हाल्यो ? यसको उत्तर अब कांग्रेसले अन्यत्र होइन, आफैंभित्र खोज्नुपर्दछ र गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता कांग्रेसलाई महँगो भइरहेको त होइन ? पुनर्विचार र प्रष्टताका साथ जागरण आउनु पर्छ ।
अब चौधौँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने लोकतन्त्रको अगुवा शक्ति भनिने नेपाली कांग्रेसको वर्तमान चरित्र पैतृक सम्पत्तिको अंशका रूपमा हातपरेको, बजार साँघुरिएको र यथास्थितिमा चलेको पुरानो कम्पनीजस्तो मात्र हुँदैछ जहाँ कोइराला, देउवा र पौडेल (कोदेपौ) मूख्य शेयरहोल्डर भएका छन् । उनीहरू आ–आफ्ना भागको लाभांशमात्र हिसाब गर्दछन् तर कम्पनीको बजार विस्तारका लागि सिन्को पनि भाँच्न नचाहने/नसक्ने साहु झैँ लाग्दछन् । महाधिवेशन आउन एकवर्ष पनि छैन, तर एउटा प्रतिष्ठित लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतन्त्रका यी दिनमा घिसिपिटी चलेको बिजनेश कम्पनीमा रूपान्तरण हुनु लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि कति स्वागतयोग्य होला, त्यो त जिम्मेवारहरूले नै जान्ने कुरा हो ।
अर्कातिर नवोदित नेतृत्व र होनहार भनिएको नयाँ पुस्तामा पनि ब्यवहारगत जटिलता र विकृति प्रशस्तै छन् । अहिलेसम्ममा नयाँ पुस्ताले पनि नयाँ नेतृत्वरुपी चिल्लापात देखाइसकेको हुनुपर्ने हो । मनको कुरा भँजाएर वा कोठाको मिटिङ् देखाएर पार्टी चलाउन खोज्नु आफैंमा निरिहता र बिडम्बनाको द्योतक हो । तर नयाँ पुस्ता पनि त्यही निरिहता र बिडम्बनाको माखेसाङ्लोमा जेलिनपुगेको छ । हिजो राजतन्त्र रहँदासम्म आफ्ना सबै दोषका लागि राजतन्त्रतिर देखाएर कांग्रेसको बाटोमा दरबार नै तगारो भइदियो भनी अर्थ लगाइदिँदा तत्कालका लागि नाक जोगाउने उपाय हुन्थ्यो । तर राजतन्त्र नभएका यी दिनमाचाहिँ कांग्रेसलाई आफ्नो पौरख चलाउन केले तगारो हाल्यो ? यसको उत्तर अब कांग्रेसले अन्यत्र होइन, आफैंभित्र खोज्नुपर्दछ र गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता कांग्रेसलाई महँगो भइरहेको त होइन ? पुनर्विचार र प्रष्टताका साथ जागरण आउनु पर्छ ।
सभापति हुने उच्च सम्भावनामा रहेका ‘कोदेपौ’ लाई उपलब्ध अवसर, वातावरण, उमेर तथा स्वास्थ्य र गतिशीलता दृष्टिगत गर्दा उनीहरूमध्ये कसैबाट पनि धेरै काम हुने आशा गर्नु ब्यर्थ हो । सभापति हुनेले आफ्ना पालामा दुईटा काम गर्न सके भने त्यो नै ऐतिहासिक कीर्तिमान हुने थियो । पहिलो, पार्टीमा विद्यमान गैरसैद्धान्तिक तथा स्वार्थको विवादलाई जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै कठोरताका साथ अन्त्य गरी यसलाई संस्थागत, सामुहिक नेतृत्वको, बहसमा आधारित पूर्ण अनुशासित, सुसंगठित, नीति र विचारप्रधान पार्टी बनाइदिने । र दोस्रो— पार्टीमा उत्साह र सिर्जनशीलता बढेर आएको सन्देश पनि दिने साधनका रूपमा सबै जिल्ला कमिटी र सकेसम्म नगर र गाउँसम्म आफ्नै पार्टी भवन बनाउन प्रयास र अभियानको थालनी गर्ने । यो नाजायज अपेक्षा होइन, जागरणको मूर्त रुप यही हुनसक्छ ।
आफ्नो कार्यकालमा कांग्रेस सभापति देउवा पार्टीबाहिरका अनेक अदृश्य र तिलश्मी दवाव र अनिवार्यताको बिवश बन्दी बनेकै हुन् । अनेकौँ लोभ–लालच र मोलाहिजामा लागेकै हुन् । प्रतिपक्षी दलका नेता भएर पनि आफ्नो थान्को र मर्यादामा नबसेर, जापानका लागि नेपाली राजदूतमा आफ्नी सासु तर राप्रपाकी नेतृलाई त्यहीँ थमाउन, निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्तमा पूर्व एआईजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गराउन, नेपाल वायुसेवा निगमका दुईटा वाइडबडी जेट विमान खरिदमा आफ्नो संलग्नता लुकाउन आदि अनेक कारणले सत्तातिर देखाएको अवाञ्छित आशक्तिले गर्दा उनीमाथिको भरोसाहिनता वा अविश्वास झनै गाढा भयो ।
पार्टी सभापति पद, सारा कार्यकर्ताको लागि निष्पक्ष न्यायमूर्ती र भँजाउन नहुने सम्पत्ति हुनुपर्ने हो । तर उनले गुटबन्दी र भागबण्डालाई संस्थागत गर्न, एउटा गुटमा सीमित रहन र ‘कोठेशक्ति र ओठेभक्ति’मै रमाउन खोजेको प्रष्टै भयो । त्यो नै पार्टीले ब्यहोर्न नसक्ने महँगो चेष्टा भइरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट भएर सत्ता ओगट्नु, लोकतान्त्रिक शिबिर प्रतिरक्षात्मक तथा किंकर्तब्यबिमूढ अवस्थामा पुग्नु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले साह्रै दुःखद हुनेछ ।
यस्ता अनगिन्ती आपत्तीजनक कार्यशैलीको कारणले गर्दा पनि सभापति देउवाले अब फेरि सभापति हुने योग्यता र औचित्य गुमाइसकेका छन् । उनका प्रति हिजोको उत्साह पनि आज निराशामा परिणत हुँदैगएको छ । पार्टी सभापति पद, सारा कार्यकर्ताको लागि निष्पक्ष न्यायमूर्ती र भँजाउन नहुने सम्पत्ति हुनुपर्ने हो । तर उनले गुटबन्दी र भागबण्डालाई संस्थागत गर्न, एउटा गुटमा सीमित रहन र ‘कोठेशक्ति र ओठेभक्ति’मै रमाउन खोजेको प्रष्टै भयो । त्यो नै पार्टीले ब्यहोर्न नसक्ने महँगो चेष्टा भइरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट भएर सत्ता ओगट्नु, लोकतान्त्रिक शिबिर प्रतिरक्षात्मक तथा किंकर्तब्यबिमूढ अवस्थामा पुग्नु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले साह्रै दुःखद हुनेछ ।
लोकतन्त्रको सबभन्दा जेठो, ठूलो र अगुवा शक्ति मानिएको कांग्रेसमा शक्तिसञ्चय बढेर आयो भने मात्र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको अस्तित्वको अर्थ हुनेछ । के हाल चालु जागरण अभियानले पार्टीभित्र यस्तो अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ त ? सकारात्मक भएर आशा गरौं ।
#कोइराला- देउवा - पौडेल